ဆိုးပါ့ SOPA | Lionslayer : The Legend
SOPA ဆိုတာ Stop Online Piracy Act ရဲ့ အတိုဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှာ အဆုံးအဖြတ်ကျမှာ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်က ရုပ်ရှင်၊ စာပေ၊ သီချင်း အနုပညာထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်တယ်။ ခုမှမဟုတ် အရင်ကလည်း လွှတ်တော်မှာ တက်ပေမဲ့ ကန့်ကွက်သူများတာကြောင့် အတည်မဖြစ်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်က ဝဘ်ဆိုက်တော်တော်များများရဲ့ ဆာဗာတွေက အမေရိကန်မှာ ရှိတယ်။ SOPA သာ ဥပဒေအဖြစ် အသက်ဝင်သွားရင် အခုလက်ရှိ အွန်လိုင်းမှာ ပိုင်းရိတ် ရုပ်ရှင်ဆိုက်၊ ဖိုင်အပ်လုတ်၊ သီချင်းဆိုက်တွေကို ဟို့စတင်း ပရိုဗိုက်ဒါတွေ၊ ဒိုမိန်း မှတ်ပုံတင်သူတွေဆီကနေ (ယုတ်စွအဆုံး ISP ကနေ) တိုက်ရိုက် ဖျက်ချခိုင်း ရပ်ခိုင်းလို့ ရတယ်။ ပိုင်းရိတ်ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို တွေ့ပြီဆိုပါစို့။ အခု လောလောဆယ်မှာက ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီက အဲဒီရုပ်ရှင်တင်ထားတဲ့ဆိုက်ကို တောင်းဆိုရတယ်။ တောင်းဆိုတာကို မလိုက်လျောရင် တရားစွဲ၊ တရားရုံးက အပြစ်ရှိကြောင်း သံသယ ဖြစ်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်ကိုဖျက်စေ၊ သို့ ဒီဆိုက်ကို ရပ်စေ ဆိုမှ ပိတ်လို့ရတယ်။ အခုဥပဒေသာ အသက်ဝင်သွားရင် ဆိုက်ပိုင်ရှင်ကို အသာခေါက်ထားပြီး ဟို့စတင်းပရိုဗိုက်ဒါဆီမှာ ဒီဆိုက်ကို တန်းပိတ်ခိုင်းလို့ ရတယ်။ ဒီဥပဒေသာ ပေါ်ပေါက်လာရင် မူလ အနုပညာ ထုတ်လုပ်သူတွေကို အင်မတန် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမှာ ဖြစ်တယ်။ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ပိုင်းရိတ်ကနေ ဆုံးရှုံးနေတာ ၁၀၀ ဘီလျံဖိုးလောက် ရှိတယ်ဆိုတယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်မယ်။ အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင်၊ စာအုပ်၊ ဆော့ဝဲ၊ မန်းဂ တွေကို မြန်မာတစ်ပြည်ထဲတင် ခိုးစားနေတာ မနည်းလှဘူး။ လူဦးရေ ဘီလျံချီတဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယမှာလည်း ခိုးကူးတွေ အများဆုံး သုံးကြတယ်ဆိုတယ်။
မကောင်းတာက အများကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ ဆိုက်တွေနဲ့ အခမဲ့ လွတ်လပ် သတင်းရင်းမြစ် ဆိုက်တွေအတွက်ပါ။ Youtube က အကောင့်တစ်ခုမှာ ခိုးကူးသီချင်းတစ်ပုဒ် တင်ထားပြီဆိုပါစို့။ Youtube ဒိုမိန်းကြီး တစ်ခုလုံးကို ချက်ချင်း ရပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ Facebook မှာ ပိုင်းရိတ်သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေ တင်ထားရင် Facebook.com ကြီး တစ်ခုလုံးကို ချက်ချင်း ပိတ်ခိုင်းလို့ ရတယ်။ အပြစ်ရှိကြောင်း ထင်ရှားမှသာ ပိတ်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ သံသယ ဖြစ်ရုံနဲ့တင် ပိတ်ခိုင်းလို့ ရတဲ့အတွက် တော်တော် ပြင်းထန်တဲ့ ဥပဒေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အင်အားကြီးမားတဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့တွေနဲ့ နောက်ကလိုက်နိုင်တဲ့ငွေအင်အား ရှိတာကြောင့် ဒီလိုအမှုဖြစ်ရင် သိပ်မှုစရာ မရှိပေမဲ့ အခုမှထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းပေါက်စတွေဆိုရင်တော့ ဘဝပျက်ပါပြီ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဝီကီပီးဒီးယားလို အများက ဝိုင်းပံ့ပိုးနေတဲ့ ဆိုက်တွေပါပဲ။ ဒီလိုဆိုက်တွေဟာ ခိုးကူးဆန့်ကျင်တယ်၊ အခမဲ့ လွတ်လပ်ရင်းမြစ်တွေသာ သုံးစွဲတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူမဆို တည်းဖြတ်လို့ရနေတဲ့အတွက် ခိုးကူးမကင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရောပါနေပါတယ်။ မပါဘူး မရှိဘူး ဆိုရင်တောင် တစ်ယောက်ယောက်က ရုတ်ချည်းပဲ ကောက်တင်ပြီး ဝီကီပီးဒီးယားကို ချက်ချင်းပိတ်ခိုင်းလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝီကီသမား အများစုကြီးက ဒီဥပဒေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ ဝီကီတည်ထောင်သူရဲ့ စာမျက်နှာမှာ ဝီကီစာမျက်နှာအကုန်လုံးကို ဗလာ လုပ်ပစ်ပြီး ဆန္ဒပြဖို့ တောင် ကြံရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ အင်မတန်ကောင်းတာမို့ ဒီဆောင်းပါးကို ချက်ချင်းပဲ ကောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အတည်သာဖြစ်သွားရင် အင်တာနက်ကြီး အရင်နဲ့ မတူတော့မှာတော့ သေချာပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ လူတော်တော်များများ ခိုးကူးပစ္စည်းဆိုတာကို ပိုသတိပြုမိလာကြမယ်၊ အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပိုမြတ်လာကြမယ်လို့တော့ အကြမ်းဖျင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ခိုးကူး ပပျောက်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်သေးလောက်ပါဘူး။ မသကာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ပိုရှိတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေ (ဥပမာ နယ်သာလန်) ကို ရွှေ့သွားမယ် ထင်တာပါပဲ။ ဒီဥပဒေ ဒီနှစ် အတည်မဖြစ်လည်း နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင် လွှတ်တော်မှာ ပြန်တက်လာမှာ ပါပဲ။ အခုမဟုတ်တောင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ အတည်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ ဒီနေ့ ဒီသတင်းကို နားစွင့်နေပါတယ်။
SOPA 2.0 will be revised on Tuesday.
The hearing will continue into Friday and maybe longer.
Tags: Internet, law, movie, pirated, SOPA, web, ခိုးကူး
2 Responses to “ဆိုးပါ့ SOPA”
Really nice post. Thank:)